ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၁၉၉၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် Published သုတေသန (1997) ၏တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း
အဲလိဇဗက် ODDONE PAOLUCCI, Mark GENUIS, AND Claudio VIOLATO
NATIONAL မိသားစုသုတေသနနှင့်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း, Calgary, Calgary ၏ Alberta တက္ကသိုလ်, Calgary, Alberta
46 ၏ Meta-analysis သည်လေ့လာမှုများထုတ်ဝေသောမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများနှင့်သဘောထားများအပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအများစုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြုသောအမှုခံခဲ့ရ (39; 85%) နှင့် 1962 ထံမှ 1995 ဖို့နေ့စွဲအတွက်အရွယ်ရှိ, 35% နှင့်အတူ (ဎ = 16) 1990 နှင့် 1995 နှင့် 33% (ဎ = 15) အကြားထုတ်ဝေ 1978 အကြားနှင့် 1983 ။ 12,323 လူများတစ်ဦးကစုစုပေါင်းနမူနာအရွယ်အစားပစ္စုပ္ပန် Meta-analysis သည်ဖွဲ့စည်း။ effect အရွယ်အစား (ဃ) တစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသောလေ့လာမှုများများအတွက်မှီခို variable တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်တွက်ချက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းနမူနာ 12 ၏အရွယ်အစားသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကာဆနျ့ကငျြဘသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy (.68 နှင့် .65), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှု (.67 နှင့် .46), ရငျးနှီးသောဆက်ဆံရေး (.83 နှင့် .40) နှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္(ာရီ (.74 နှင့် .64) အတွက်ပျမ်းမျှအလေးမနှင့်အလေးချိန်d။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့သောအခါအပျက်သဘောဆောင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်တိုးများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုခြင်း ဤရလဒ်သည်ဤဒေသရှိသုတေသနညစ်ညမ်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုကျော်လွန်ရွှေ့နိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအလားအလာထိုကဲ့သို့သောလိင်, လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (SES) အဖြစ် variable တွေကိုစိစစ်, ထိတွေ့မှု၏ဖြစ်ရပ်များအရေအတွက်သည်ပါဝင်သူမှညစ်ညမ်းမိတ်ဆက်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဆက်ဆံရေးအကဲဆတ်သော, ညစ်ညမ်း၏ဘာသာရပ်, ညစ်ညမ်းအလတ်စားနှင့်ညစ်ညမ်း၏အဓိပ်ပါယျ၏ဘွဲ့တစ်ခုချင်းစီအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် လေ့လာမှု။ ရလဒ်ရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းသုတေသနများ၏အရည်အသွေးနှင့်ပစ္စုပ္ပန် Meta-analysis သည်အတွက်မွေးရာပါနောက်ဆက်တွဲန့်အသတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ပြဿနာနှစ်ပေါင်းများစွာအာရုံကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ရရှိထားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် Published သုတေသနတစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးလွှမ်းမိုးသောအများစု, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံး, အစီရင်ခံစာအလွန်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခံတော်မူပြီးမှ။ တကယ်တော့, Wilson နဲ့ Abelson (1973) အုပ်စုများ၏အများစုပထမဦးဆုံးအသက်မတိုင်မီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခံရခြင်းနှင့်အတူ 84 ယောက်ျား၏% နှင့် 69 အမျိုးသမီးများ၏%, ညစ်ညမ်း၏လတ်သို့မဟုတ်စာသားသည် Modes ထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ထိတွေ့အစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရ 21 နှစ်ပေါင်း။ မီဒီယာ၏ကြီးမြတ်သောအမျိုးမျိုးမှတဆင့်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်ဖို့လူများအတွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများ (ဥပမာ, မဂ္ဂဇင်းများ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဗီဒီယို, World Wide Web) နဲ့ဒွန်တွဲပါကညစ်ညမ်းထိတွေ့လူ့အပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာနေသည်။ သုတေသီများညစ်ညမ်းထိတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကစာရင်းအင်းဘုံဖြစ်ပြပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ sequelae များ၏စာရင်း, အငြင်းပွားဖွယ်ရာကြီးမားသည်နှင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့များမှာသံသယနေစဉ်။ လက်ရှိပညာသင်နှစ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသက်ဆိုင်ရာနှင့်သိသာထင်ရှားသောလူမှုသည့်နိုင်ငံရေးအရသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သော်လည်း, ကညစ်ညမ်း၏ပြဿနာမကြာခဏတစ်အတွေးအခေါ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားရပ်တည်ချက်ထက်တစ်ပင်ကိုယ်မူလအနေအထားကနေချဉ်းကပ်ထားပြီးကြောင်းသိသာသည်။ လက်ရှိ meta-analytic စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများ၏မေးခွန်းကိုပင်မပလက်ဖောင်းသို့လွှဲပြောင်းရန်ကြိုးစားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆိုပါသက်တမ်းကျော်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းစေရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို, နှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင် meta-analysis နှင့်အတူကိုက်ညီ (Allen, D'Alessio, & Brezgel, 1995) နှင့်တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုများ (Baron & Straus, 1987; Fisher & Barak, 1991; Garcia က, 1986; Grey က, 1982; Gunther, 1995; Hui, 1986; Lottes, Weinberg, & Weller, 1993)၊ လက်ရှိ meta-analysis ၏ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူမှုလေ့လာမှုသီအိုရီနှင့်အတုပုံစံကို အသုံးပြု၍ ကျူးကျော်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ လိင်စိတ်ပြောင်းလွယ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းဘားဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်နေ့စဉ်လူ့ဘ ၀ အဆက်အသွယ်များ၌အလားတူသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်စောဒကတက်နိုင်သည်ဟုစောဒကတက်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများသည်ဇာတ်ကောင်များလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ပုံသည်“ ပုံမှန်” နှင့်သင့်လျော်သောအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ ဤမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီ၎င်းတို့သည်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော (သို့) တစ် ဦး ချင်းအဆင့်တွင်မလိုလားအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်သောအပြုအမူများနှင့်အပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသောအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပုံရသည်။
ရလဒ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းများနှင့်တသမတ်တည်းပါ၏ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအကျင့်ယိုယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်ခြင်း၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမှုတွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္acceptာရီများကိုလက်ခံခြင်းတို့အတွက်ပိုမိုအန္တရာယ်များစေသည်။ ကျန်းမာ။ တည်ငြိမ်သောလူ့ဘောင်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောပင်ကိုယ်မူလသုတေသန၏နိဂုံးကိုတက်ရောက်ရန်အချိန်တန်ပြီ။